Hydroxyprogesterone ntụ ntụ (630-56-8) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Hydroxyprogesterone ntụ ntụ
Rating: SKU: 630-56-8. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na ikike mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Hydroxyprogesterone caproate powder (630-56-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ bụ sịntetik steroid nke yiri medroxyprogesterone acetate na megestrol acetate. Ọ bụ ihe ester sitere na 17a-hydroxyprogesterone e guzobere site na caproic acid (hexanoic acid). A na-ere ahịa hydroxyprogesterone caproate n'okpuru aha aha MAKENA.
Hydroxyprogesterone na-ekpuchi uzuzu uzuzu
Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ isi agwa
aha: Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Chemical Names: Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Aha aha: Hydroxyprogesterone caproate (OHPC) ntụ ntụ, ntụ ntụ Delalutin, ntụpu proluton, 630-56-8
Hydroxyprogesterone akpụcha ntụ ntụ Usage
1) Maka mmepụta mbufe nke mbu na nwanyi na enweghi nwa ime nke nwere mkporita nke singleton nke omuma.
Ngwá ọgwụ ejiri anụ ahụ (naanị otu ma ọ bụ ọtụtụ dose Makena)
Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma 16 dị afọ iri na ụma
250 mg (1 mL) IM otu ugboro kwa izu (ụbọchị 7 niile). Malite usoro ọgwụgwọ n'oge ọ bụla n'etiti izu 16 na ụbọchị 0 nke ime ime ruo izu 20 na ụbọchị 6 nke ime ime. Gaa n'ihu otu izu ruo izu 37 (site na 36 izu, 6 ụbọchị) nke imegharị ma ọ bụ nnyefe, ihe ọbụla na-ebu ụzọ. Ihe dị irè nke hydroxyprogesterone dabere na mmụba na oke nke ndị inyom na-agbapụta na-erughị oge 37 nke gestation. Enweghi ule a na-achịkwa nke na-egosipụta uru ntanetị dị kpọmkwem, dịka mmụba nke ọnwụ na-adịghị na nhụjuanya. MGBE A GA-EME: Hydroxyprogesterone abụghị maka iji ụmụ nwanyị na-emegharị ọtụtụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ize ndụ maka ịmalite ịmụ nwa.
Ngwongwo na-edozi onwe ya (ntinye onu na Makena naanị)
275 mg (1.1 mL) n'ụzọ dị otu ugboro kwa izu (ụbọchị 7 niile). Malite usoro ọgwụgwọ n'oge ọ bụla n'etiti izu 16 na ụbọchị 0 nke ime ime ruo izu 20 na ụbọchị 6 nke ime ime. Gaa n'ihu otu izu ruo izu 37 (site na 36 izu, 6 ụbọchị) nke imegharị ma ọ bụ nnyefe, ihe ọbụla na-ebu ụzọ. Ihe dị irè nke hydroxyprogesterone dabere na mmụba na oke nke ndị inyom na-agbapụta na-erughị oge 37 nke gestation. Enweghi ule a na-achịkwa nke na-egosipụta uru ntanetị dị kpọmkwem, dịka mmụba nke ọnwụ na-adịghị na nhụjuanya. MGBE A GA-EME: Hydroxyprogesterone abụghị maka iji ụmụ nwanyị na-emegharị ọtụtụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ize ndụ maka ịmalite ịmụ nwa.
2) Maka ọgwụgwọ nke enweghi ike ime ya, na-agaghachi, na cancer cancer endometrial metastatic.
Ngwongwo nke intramuscular
1,000 mg ma ọ bụ karịa kwa izu IM (jikọta 1 gram IM n'otu ugboro kwa izu na 1 gram IM n'otu ugboro kwa ụbọchị). Gharie anya mgbe nlọghachi mere, ma ọ bụ mgbe izu 12 na-enweghị mgbaru ọsọ ebumnuche. Enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị nro na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ (ịwa ahụ, radiation, ma ọ bụ chemotherapy, ma ọ bụ ihe ndị a). Ọgwụgwọ nsonaazụ ndị a kọrọ na ọ dị ugbu a dị mma n'ọdịdị nke akụkọ ọdịiche dị iche iche nke akụkọ ọdịdị nke endometrial adenocarcinoma.
3) Maka ọgwụgwọ nke amorrhea (isi ma ọ bụ nke abụọ) ma ọ bụ maka ọgbụgba ọbara nwa na-arụ ọrụ na-akpata n'ihi na ọ bụ enweghị ọgwụgwọ.
Ndị okenye na ndị nọ n'afọ iri na ụma
375 mg IM dị ka otu mkpụrụ, nyere n'oge ọ bụla. Ngwọta ọzọ nwere ike ịmalite mgbe ụbọchị 4 nke nkwụsịtụ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ dịghị ọbara ọgbụgba, 21 ụbọchị mgbe ọnụọgụ mbụ. Ọ bụrụ enweghị nzaghachi mgbe usoro 4 gasịrị, kwụsịrị. Ọnụ ọgụgụ nke cycles eji na mgbe iji cyclic dosing dabere na ihe egosiri na ojiji na ma a na-ejikọta ọgwụgwọ estrogen n'otu oge. Mgbanwe cyclic a na-atụ aro ya na estrogen bụ nke a (ụbọchị 28; ugboro ugboro 4) Ụbọchị 1 nke oge ọ bụla: Estradiol Valerate Injection (20 mg IM); mgbe ahụ, 2 izu ole na ole nke ụbọchị 1: ntụpọ mmiri hydroxyprogesterone 250 mg IM; mgbe ahụ, Estradiol Valerate (5 mg IM) 4 izu mgbe ụbọchị 1: Nke a bụ Day 1 nke usoro ọzọ. Tinyegharịa dị ka egosiri. Ọ bụrụ na enweghi ogo estrogen na ndị ọrịa site na amorrhea, enweghi ike ime nsọ nwanyị ruo mgbe e nyeworo estrogen nye ọtụtụ ọnwa. Kwụsị ya mgbe usoro ọgwụgwọ cyclic agaghịzi achọ.
Iji nwalee maka mmepụta estrogen dị egwu ("Medical D and C").
250 mg IM ozugbo; kwupụta maka nkwenye na izu 4 mgbe mbido mbụ. Gbanyụọ ya mgbe ị gachara nke abụọ. Ntughari kwesịrị ime 7 gaa na 14 ụbọchị mgbe ogwu.
Ịdọ aka ná ntị na hydroxyprogesterone caproate ntụ ntụ
Hydroxyprogesterone nke ogwu ogwu, gụnyere ihe dị iche iche na-emepụta, gbakwunyere nkọwa nke mkpa ahụike mgbe eji belata ohere nke ịmalite ọmụmụ nwa na nwanyị ma niile n'ime ihe ndị a na-esote:
1. Onye otu a nwere afọ ime nwa.
2. Onye otu a nwere akwụkwọ edepụtara na mbụ nke singleton bụ nke a na-enweghi mgbe ọ na-erughị oge 37 n'iji gọọmenti na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-agbazikwa oge.
3. Onye ọ bụla enwebeghị ọrụ ọ bụla tupu ya amalite ma ọ bụ oge ọ na-adịghị ahụkebe nke membranes n'oge afọ ime ugbu a.
4. A na-amalite ọgwụgwọ n'agbata izu 16, ụbọchị 0 na izu 20, ụbọchị 6 nke gestation.
5. Achọghị iji nlezianya eme ihe karịa izu ụka ruo mgbe izu 36 gestation ma ọ bụ oge nke nnyefe (nke ọ bụla na-ebu ụzọ mee) maka ngụkọta zuru oke nke ihe karịrị 21 injections.
6. Ime adịghị agafe 250 mg site na ogwu.
Aha a na-akpọ Hydroxyprogesterone na-eme ka ọ bụrụ ime-4-ene-3,20-dione, 17 [(1oxohexyl) oxy]. Ọ nwere usoro mgbakwunye nke C27H40O4 na arọ nha nke 428.60. Hydroxyprogesterone ntụ ntụ dị ka ọcha ka ọ fọrọ nke nta ka kristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ na ebe mgbaze nke 120 ° -124 ° C.
Ihe omuma nke hydrogloride na-eme ka a ghara ịmalite ịmalite ịmụ nwa, ma ọtụtụ ụzọ nwere ike itinye aka na ya .Progesterone na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhazi usoro ọmụmụ nwa nwanyị ma dị mkpa maka ịmepụta nke embrayo na mmezi nke ime ime. Ọ na-eme site na nkwekọrịta iji mee ka ndị nabata ya dị n'ime akpanwa, ovaries, ara na usoro nchịkwa dị n'etiti. Ndị nzaba a dị na 2 isoforms, PR-A na PR-B. Progesterone nke jikọrọ ndị nabatara na-eduga ná nchịkwa nke nsụgharị mkpụrụ ndụ. Ihe ndị a na-ebute mmetụta mgbochi mkpali nke na-emebi ọnọdụ proinflammatory nke na-eme na mmalite nke ọrụ, ma na-ejide ụbụrụ na-arụ ọrụ nke ọma site na ịme ka progesterone na-arụ ọrụ na myometrium.
Pharmacodynamics nke Hydroxyprogesterone akpụkpọ anụ uzuzu: Ọ dịghị nchọpụta ọgwụ pharmacodynamic a kapịrị ọnụ iji chọpụta Hydroxyprogesterone na-emepụta ntụ ntụ. Otú ọ dị, usoro mmemme nwere ike ịkọtara ya na mmekọrịta dị elu n'etiti progesterone na progesterone receptors.
Hydroxyprogesterone na-acha uhie uhie ọkara ndụ bụ 16 ụbọchị (± 6 ụbọchị).
Hydroxyprogesterone okpukpu ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Hydroxyprogesterone okpuru uzuzu ahia
Esi zụọ Hydroxyprogesterone ntụ ntụ si AASraw